नाटक : आवरण-अनावरण - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : यो दलन
खोजपत्र : नेपाली नाटकमा महिलालेखन →
‘ओ महाशय ! किन यसरी मलाई हेरेर हाँसेको ?’ मेरो आवाज सुनेर त्यो मान्छे खुसीले झन्डै पागल भयो । उसले ममाथि धेरै वर्ष लगाएर गरेको वाक् परीक्षण सफल भएको रहेछ । जनावरलाई मान्छेको भाषा बोल्न लगाउने औषधिको प्रयोग उसले म माथि गरेको रहेछ । त्यो दिनदेखि नै म बोल्न सक्ने भएँ । अनि त्यही डाक्टर मास्केले मलाई बाँदरबाट मान्छे बनायो । मतलब बोल्न सक्ने बाँदर बनायो । नयाँ अस्तित्व स्वीकार गरेर म डाक्टर मास्केको सहायकका रूपमा काम गरिरहेको छु । उपयुक्त दिन आयो भने मात्र मलाई मान्छेको समाजमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् उनले । म अचेल आफूलाई बाँदर कम र मान्छे ज्यादा ठान्छु । के म ठीक छु ?
(बाँदरको नजर ल्यापटपमा पर्छ । नजिकै जान्छ ।) ओहो ! डाक्टर मास्केको इमेल आएको रहेछ । (पढ्दै) “आज आउन अलि ढिलो हुन्छ । भिजिटर्सलाई होल्ड गरिराख्नु !’ (दर्शकसँग) दर्शकवृन्द ! हाम्रा डाक्टर मास्केलाई भेट्न इतिहास, वर्तमान र भविष्यका थुपै्र पात्रहरू आउने गर्छन् । कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ, डाक्टर मास्केको मृत्यु भयो भने मैले कसरी उनको काम सम्हाल्ने ? मान्छेको समाजमा आफूलाई कुन रूपमा चिनाउने ? म बोल्न थालेदेखि आजसम्म यो प्रयोगशालाभन्दा बाहिर गएकै छैन । म कसरी समाजसामु प्रस्तुत हुने ? -बाँदर थचक्क बस्छ) अहँ ! मैले यस्तो अनिष्ट सोच्नुहुन्न । -बाहिर कसैले डोरबेल बजाएको सुनिन्छ । बाँदर सतर्क हुन्छ । घडीतिर नजर लगाउँछ ।) सायद भिजिटर्स आएको हुनुपर्छ ।
यन्त्र-मानव ः म अहिलेलाई जान लाग्दै छु । तेरो मालिक आयो भने विज्ञानमन्त्री रोबोट अल्फाबिटा आएको थियो भनिदिनु । -जान लाग्छ । फेरि अडिँदै) अँ । सुन । यदि औषधि पत्ता लगाएको रहेछ भने मलाई खबर गर्न नबिर्सेलास् नि नत्र म तँलाई बाँदरबाट कुकुर बनाइदिन्छु । -हाँस्दै) हा…हा…हा…
युवतीः तपाईर … ?
डाक्टरः हेर मान्यता । तिमी मसँग ठट्टा गरिरहेकी छौ ? वा मेरो मन बुभmन खोजिरहेकी छौ ? मलाई थाहा छैन तर म तिमीले राखेको प्रस्ताव स्वीकार्न सक्दिन । -एक छिन मौनता छाउँछ । सम्हालिँदैै) मिस मान्यता बरु म तिम्रो असल केटा साथी बन्न सक्छु ।
(श्रोत : Onlinesahitya)